သင်္ချာဗေဒ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
သင်္ချာဗေဒ	← Older posts
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, မေလ, မေလ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး |4Comments	# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished January 1, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ မိမိဘလော့ဂ်ရှိ ဆောင်းပါးများကို ကူးယူအသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် စိတ်ကြိုက် ကူးယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင် ခွင့်မတောင်းလျှင်လည်း ရပါသည်။
သို့သော် “လူ့ကျင့်ဝတ်” ကို လေးစားသောအားဖြင့်၎င်း ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် လေးစားသောအားဖြင့်၎င်း ၊ ဆောင်းပါးရေးသူအမည် “ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ် (ကွန်ပျူဗေဒသုခုမ)” နှင့် မူရင်းလင့်ခ် http://compubaydathukhuma.com/ ကို ထည့်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ယခုအခါ ဘလော့ဆိုဒ် အချို့၌၎င်း ၊ Facebook Page အချို့၌၎င်း ၊ မိမိ၏ “ကွန်ပျူဗေဒသုခုမ” မှ ဆောင်းပါးများကို ခွင့်တောင်းမှု မပြုသည့် အပြင် “ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသကဲ့သို့” ပြုလုပ်နေခြင်းများကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တွေ့ရပါသည် ၊ မိတ်ဆွေများကလည်း အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် သိရပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို နိုင်ငံကြီးသား ပီသပြီး အမျိုးကောင်း သားသမီးများ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါလျှင် ထိုကဲ့သို့ လူအထင်သေးခံရမည့် အလုပ်မျိုးကို မပြုလုပ်ကြပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
Preview ။ ။ ယခုနှစ်မှာ မိဿရာသီခွင်အတွင်း မွေးဖွားလာကြသူများအတွက် ကံဇာတာ အကောင်း/အညံ့တွေ ရောထွေးနေပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာ မိဿရာသီဖွားများအတွက် Any Changes တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပြီး ဘ၀အပြောင်းအလဲ ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဘ၀တက်လမ်းအတွက် ခြေလှမ်းတိုင်းကို သတိထားပြီး လှမ်းလျှောက်ရမယ့် အနေအထားရှိပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ရုပ်ပိုင်းဆိုတော့ ငွေရေး ကြေးရေး ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ ကျန်းမာရေးတွေပါ ပါပြီပေါ့)။ ဒီနှစ်ဟာ မိဿရာသီဖွားများအတွက် အခက်အခဲများနိုင်တယ်။ မမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ ဘေးဥပဒ်တွေ ၀င်ရောက်နိုင်တယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ရုတ်တရက် ဘ၀အခြေအနေ တိုးတက်မြင့်မားသွားခြင်းမျိုးလည်း ရှိတယ်။ အကောင်းတွေရော အညံ့တွေရော စုပြုံဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ နှစ်တနှစ်လို့ ဆိုရမယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ။ ။ ဒီနှစ်ဟာ မိဿရာသီဖွားတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ အထူးဝင်ရောက်နိုင်တယ်။ Stress အလွန်များမယ့် နှစ်မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အထူး ပျက်ပြားဖွယ် ရှိတယ်။ အထီးကျန်ဆန်မှုကို ခံစားရမယ်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ ကျဆင်းမယ်။ လူတစ်ဖက်သား အပေါ်လည်း မယုံမကြည်ဖြစ်မယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်ပွားဖို့ရှိတယ်။ ကြုံလာသမျှ ကိစ္စတိုင်းဟာ စိတ်ညစ်စရာတွေချည်းလို့သာ ထင်လာမယ်။ ဒီနှစ်အတွက် မိဿရာသီဖွားတွေ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို အထူးမြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, 2013 ဗေဒင်, Zodiac for 2013, သင်္ချာဗေဒ, ဗေဒင် 2013, ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဟောကိန်းများ | 153 Comments	# ယနေ့ မွေးဖွား ရင်သွေးများ (Today’s Born Babies)Published December 3, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Today’s born babies ဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍလေးကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ယနေ့ ယနေ့မှာ မွေးဖွားလာတဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေရဲ့ ဘ၀ကံကြမ္မာနဲ့ ရှောင်ရန်/ဆောင်ရန်လေးတွေ ၊ နာမည်ပေးနည်း (အကြမ်းဖျဉ်း) တွေကို နေ့စဉ်တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အလုပ် ဆိုတော့ သိပ်ကြီး ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းကြီးတော့ မရေးနိုင်ပါဘူး။ အကျဉ်းချုပ်လောက်ပေါ့။ နည်းစနစ်ကတော့ “Numerology” ဂဏန်းဗေဒင် နဲ့ အနောက်တိုင်း (၁၂)ရာသီခွင် တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ်နည်းလေးလည်း အနည်းအကျဉ်း ဖြည့်စွက် ပေးထားပါတယ်။ နာမည်ပေးနည်းကတော့ အကြမ်းလောက်ဘဲပေါ့။ တိုင်စဉ် မမှားရုံလောက်ပါဘဲ။ ဒီဇင်ဘာလ တစ်ရက်နေ့ကနေ စ,ပြီး ရေးပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ကြရအောင်။
2012 ဒီဇင်ဘာလ (1) ရက်နေ့ မွေးသော ရင်သွေးငယ်များ
အနောက်တိုင်းရာသီခွင် အရ - - ဓနု ရာသီဖွား
ဂဏန်းဗေဒင် အရ - – (1) ဂဏန်း သမား
မဟာဘုတ် အဖွား အရ - - စနေ ရာဇဖွား
ဒီနေ့မှာ မွေးတဲ့ ရင်သွေးငယ်များဟာ ဘ၀မှာ အကြီးအကဲ ဖြစ်ဖို့ ကံဇာတာ ပါတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝရမယ့် ကံကြမ္မာလည်း ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ အရမ်းပွင့်လင်းတတ်ပေမယ့် အညိုးတော့ ကြီးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သစ္စာရှိမယ်။ ထက်ထက်မြက်မြက် ရှိမယ်။ တုံးဆိုတိုက် ကျားဆိုကိုက် ဆိုသူများဖြစ်မယ်။ ဘ၀မှာ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာလေးတွေတော့ ရှိတတ်တယ်။ ဘ၀အောင်မြင်မှုအတွက် အမြဲရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရမယ်။ အေးအေးဆေးဆေး နေရမယ့် ကံမျိုး နည်းလိမ့်မယ်။ အိုဇာတာတော့ ကောင်းတယ်။ အသက်ကြီးရင် ဘုရားတရားဘက်ကို ရောက်သွားတတ်တယ်။ မျက်စေ့ကို ဥပဒ်ပေးတတ်လို့ သတိထားရမယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့ လူက သစ္စာဖောက်ခံရတတ်တဲ့ ဇာတာမျိုး ရှိတာကိုတော့ တစ်ဘ၀လုံး သတိထားရမယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင် “နှလုံး” ကို သတိထားရမယ်။
နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ – စနေ အစ . . . စနေ အဆုံး ။ စနေ အစ . . . တနင်္ဂနွေ အဆုံး တွေ ပေးနိုင်တယ်။ နေ့သင့် နံသင့် မဟုတ်ဘဲ အခြားနံတွေနဲ့ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သောကြာ အစ . . . တနင်္ဂနွေ အဆုံး ။ ဗုဒ္ဓဟူး အစ . . . တနင်္ဂနွေ အဆုံးတွေနဲ့ ပေးနိုင်တယ်။ သတိထားရမယ့် နာမည်ကတော့ စနေ စ,ပြီး ဗုဒ္ဓဟူး နံနဲ့ ပိတ်တဲ့ နာမည် (လုံးဝ) မပေးပါနဲ့။ ပက္ခတ် မိတာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မှု နဲ့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged နာမည်ပေး ဗေဒင်, နာမည်ပေးနည်း, ရင်သွေး ကံကြမ္မာ, နေ့စဉ် ဟောကိန်း, နေ့စဉ်မွေးဖွား ရင်သွေးများ, ဗေဒင်, ဗေဒင် online, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 69 Comments	# သြဂုတ်လ အတွက် နာမည်သင်္ချာ ဟောကိန်းများPublished August 21, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	လစဉ်ဟောကိန်းတွေကို ကျွန်တော် ပုံမှန်တွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်မတင်ဖြစ်ပါဘူး။
အကြောင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အသက်(၅၀)ပြည့်မွေးနေ့ကစပြီး ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အတွေး
အခေါ်တစ်ခုဝင်လာတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့် ဘလော့ဂ်လေးကို လာရောက်ဖတ်ရှုသူတွေ
ဗေဒင်ဟောကိန်းတွေဖတ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲသွားရတာ ၊ စိတ်ညစ်သွားရတာမျိုး မဖြစ်စေ
ချင်တော့ဘူး။ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတာမျိုးသာ ဖြစ်စေချင်တယ်။
ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကဆိုရင် (၇)ရက်သားသမီးအားလုံးလောက်ဘဲ ကျန်းမာရေး
(သို့) စီးပွားရေး (သို့) အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ညံ့နေလို့
မတင်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီလ(သြဂုတ်လ) လည်း သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
ကျွန်တော့်ဆီကို လစဉ်ဟောကိန်းတွေကိုတော့ မှန်မှန်လေး တင်ပေးပါလို့
လူကိုယ်တိုင်တစ်မျိုး၊ ဖုန်းနဲ့တစ်ခါ ၊ အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့် မကြာမကြာ ပူဆာကြတဲ့သူတွေ
များလွန်းလို့ မကောင်းတာရှိရင် “လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့” လေးလောက်ဘဲ ရေးပြီး
အမှန်ကတော့ ဒီ သြဂုတ်လအတွက်ကို ခါတိုင်းလို (၇)ရက်သားသမီးဟောကိန်းမဟုတ်ဘဲ
“နာမည်ဟောကိန်းစနစ်” နဲ့ ကိုယ့်နာမည်လေးကို ပေါင်းကြည့်ပြီး ရလာတဲ့ အဖြေပေါ်ကနေ
ကိုယ့်နာမည် အစ, အလုံး နဲ့ တိုင်ဆိုင်ဖတ်တဲ့ နည်းပါ။ သြဂုတ်လဆန်း ကတည်းက
တင်ရကောင်းနိုး၊ မတင်ရကောင်းနိုး နဲ့ စဉ်းစားရင် လ, တောင်မှ ကုန်လုပြီ။
ဒါပေမယ့် ညီငယ်လေးတစ်ယောက်က ဒီလထဲမှာ လုပ်မှား ကိုင်မှားတွေ
တော်တော်ဖြစ်သွားပြီး ငွေကြေးတော်တော်များများ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ သူက “ဆရာ့ရဲ့ လစဉ်ဟောကိန်းလေးသာ
တင်ပေးထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့် ကံဇာတာ ညံ့ထားတာကို ကြိုသိရရင် ဒီလောက်
အဆိုးမကြုံနိုင်ထင်တယ်” . . ဆိုတဲ့ စကားလေးကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပြီး ဒီလို
မကောင်းတာကို ကြိုတင် သတိပေးနိုင်ရင်လည်း သူတို့အတွက် အကျိုးဖြစ်နိုင်ကောင်းရဲ့
ဆိုတဲ့ အတွေးဖြစ်လာပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လ, တစ်ဝက် ကျိုးလာတော့
မှန်မမှန်ကိုလည်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ ရတာပေါ့။
ဒီလတွက်ကိန်းကလေးကတော့ နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်။ အမှန်လည်း ပိုများလာမယ် လို့
ယူဆပါတယ်။ နေ့နံနဲ့ တွက်တာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ အတိအကျတွက်တာမျိုး
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ဂဏန်းဗေဒင်, နာမည်သင်္ချာ, သင်္ချာဗေဒ, သြဂုတ်လ	# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished January 2, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2012, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၂ ခု ဟောကိန်းများ, ၂၀၁၂ ခု ၁၂ရာသီခွင် အဟောများ, ၂၀၁၂ မြန်မာ ဗေဒင်	# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများPublished August 8, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
တစ်လစာ လစဉ်ဟောကိန်းများကို တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ . . . စတဲ့ (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများလောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ယူဆတာကြောင့် ယခုလမှာ “သင်္ချာဗေဒ” ဟောကိန်းများ ကို အစီအစဉ်သစ် အဖြစ် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ “(၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်” နဲ့ “သင်္ချာဗေဒ” နှစ်ခု တိုက်ကြည့်ပြီး အကောင်း အညံ့ကို “မျှပြီး ယူရင်” အမှန်ပိုများလာမယ်လို့ ယူဆလို့ ဒီအစီအစဉ်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ လစဉ် တင်ပေးသွားမှာပါ။
ရက်ကတော့ နဲနဲတော့ နောက်ကျနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ယခုရက်ပိုင်းအထိ ကြုံဆုံ နေတာတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ ပိုရသွားတာပေါ့။ “သင်္ချာဗေဒ” ဆိုတာ “ဂဏန်းဗေဒင်” လို့ လူသိများတဲ့ အနောက်တိုင်း (Numerology) နည်းစနစ်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလို “ဂဏန်းဗေဒင်” လို့ ခေါ်တာကို နှစ်ခြိုက်မှု မရှိလို့ “သင်္ချာဗေဒ” လို့ဘဲ သုံးနှုံးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ သင်္ချာဗေဒပညာနဲ့ လစဉ်ဟောတဲ့ နည်းစနစ်လေးဟာ ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး သုတေသနတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မလုပ်ရသေးပါဘူး။ စမ်းသပ်ထားတဲ့ လူဦးရေ နည်းနေ ပါသေးတယ်။ စမ်းသပ် ပြီးသလောက်တော့ အမှန်များ ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနည်းစနစ်ကလေးရဲ့ မှန်ကန်မှုကို သိချင်လို့ ဒီလကုန်သွားရင် အမှား/အမှန် တိုက်ဆိုင်မှုကို Comment ထဲမှာ ၀င်ရေးပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းလိုပါတယ်။ တကယ့် တိုက်ဆိုင်မှုကိုသာ သိချင်ပါတယ်။ မှားရင်လည်း မှားတယ်ပေါ့။ မှန်ရင်လည်း မှန်တယ်ပေါ့။ အမှန်အတိုင်းဘဲ ရေးပေးကြပါ။ သိက္ခာချလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ၀င်ပြီး မရေးဖို့တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အများအတွက် သုတေသန လုပ်ပေးနေတာမို့ စိတ်ကောင်းလေး မွေးပေးကြပါ။ ဟောချက်အတိုင်း ကောင်းပါရက်နဲ့ သိက္ခာချလိုတာကြောင့် မဟုတ်တာဝင်ရေးရင် ကိုယ့်မှာလည်း “ဒဏ်ပြန် သင့်တတ်ပါတယ်” ။ တကယ့်ကို အမှား ရာနှုံးများရင်လည်း တွက်နည်းကို ထပ်ပြီး ပြင်ဆင် ချင်လို့ပါ။ အကူအညီ တောင်းခံခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်လစာကို အင်္ဂလိပ်မွေးရက် (1)ကနေ (31) အထိရေးရမှာ ဖြစ်လို့ ကနေ့ တစ်နေ့တည်းနဲ့ အပြီး မရေးနိုင် သေးပါဘူး။ ပြီးသလောက် ဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကနေ့ (1)ရက်နေ့ ကနေ (10)ရက် နေ့အတွင်း မွေးသူများအတွက်ပါ။ မနက်ဖြန်မှာ (11) ကနေ (20) အထိ ၊ သဘက်ခါမှာ (21) ကနေ (31) အထိ ဆက်တိုက်တင်ပေးသွားပါမယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ လ, ကုန်တဲ့ အထိပေါ့။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
1 ရက်နေ့ မွေးဖွားသူများ
ယခုလတွင် မျှော်လင့်မထားသော ရုတ်တရက် ကံကောင်းမှုကို ကြုံတွေ့ဖွယ်ရှိသည်။ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ၏ လေးစားမှုကို ရရှိမည်။ ပညာရေးကံ အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်။ ဖြေဆိုထားသော စာမေးပွဲအားလုံး အောင်မြင်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ချဲ့ထွင်ရတတ်သည်။ အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများပေါ်ထွက်ပြီး အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်များအပေါ် အနိုင်ရတတ်သည်။ ဘာသာရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရတတ်သည်။ သင်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသူ ၊ တောင့်တ နေသူဖြစ်ပါက သင့်လိုအင် ဆန္ဒများ ယခုလတွင် ပြည့်စုံနိုင်ချေရှိသည်။ ဆွေမျိုး ၊ အပေါင်းအသင်းများထဲမှ နာရေး ကိစ္စတစ်ခု ကြုံရတတ်သည်။ တစ်လလုံးအနေဖြင့် ခြုံပြောရလျှင် ကံကောင်းသော လ, တစ်လဖြစ်လိမ့်မည်။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Numerology Birth Date, Your Numbers, ဂဏန်းဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, သင့် မွေးဂဏန်း သင်္ချာ, သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ	# တော်ဝင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲPublished May 7, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ကတော့ အင်္ဂလန် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အုတ်အော် သောင်းတင်း ဖြစ်ရတဲ့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကြီး တစ်ခု ကျင်းပခဲ့တာကို Sky Net ရုပ်သံလိုင်းကနေ Live လွှင့်ပေးတာကို ကြည့်လိုက်ရသဗျာ။ အတော့်ကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားတာကလား။ မြန်မာနိုင်ငံက ကြီးကျယ်ခမ်းနား လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ “ရပ်ကွက်အငြိမ့် နဲ့ အော်ပရာပြဇာတ်” ဆိုတာလို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။
အေးလေ ဟိုက နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားဆိုတော့ “ဂလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့” ။ သူတို့ နိုင်ငံက လူတွေကလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင့် မိသားစုများဆိုရင် ချစ်လိုက် လေးစားလိုက်ကြတာများ အားကျဖို့တောင် ကောင်းသေး။
ကျွန်တော်တို့လို အသက်(၅၀)အရွယ် အဖိုးကြီးတွေအတွက်တော့ ဒီလို မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိလှတော့ပါဘူး။ လက်မထပ်ရသေးတဲ့ လူပျို အပျိုတွေ အတွက်တော့ အင်မတန် ကြည့်လို့ မ၀နိုင်တဲ့ ပွဲလမ်း အခမ်းအနား တစ်ခု ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ သူ့ခေတ်နဲ့ သူကိုး။
ဒီလို မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေ ရိုက်ပြတာကို ဘယ်လိုမှ စိတ်မ၀င်စားမိပေမယ့် ကျွန်တော် အတော် စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကတော့ ရှိသဗျို့။ တော်တော်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါဗျာ။ (ကိုယ့်လိုင်း လေ)
အဲဒါကတော့ မင်္ဂလာဆောင် ကျင်းပတဲ့ ရက်မြတ်မင်္ဂလာ ဖြစ်တော့သကိုး။ ကြည့်ပါဦးဗျာ။ ရွေးလိုက် ကြတာ။ ဧပြီလ (၂၉)ရက် တဲ့။ မြတ်စွာဘုရား။ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာပါလိမ့်။ ဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ ရက်ကိုများ ဘာလို့ ရွေးမိလိုက်ကြပါလိမ့်လို့ (သူတို့အစား) အချောင်တွေး ပူမိလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကာယကံရှင်တွေကတော့ ပျော်လို့ ရွှင်လို့ပေါ့။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged good days for wedding, MaHaBote, Myanmar Astrology, Royal Wedding, royal-wedding-prince-william-kate	# ထူးတဲ့ ကိုး (9)Published September 8, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီလထဲမှာ စက်တင်ဘာလအတွက် ဟောကိန်းများ ရေးပြီး ဘာပို့စ်တင်ရင် ကောင်းမလဲ လို့ စဉ်းစားနေတာ အဖြေမထွက်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် တွက်လို့ရတဲ့ ဗေဒင် အလွယ်တွက်နည်းလေးတွေ တင်ပေးဖို့ ရှိပေမယ့် ရှင်းပြဖို့ ပုံတွေဆွဲရတာ ပျင်းနေတာနဲ့ ရေးလက်စတွေ “တိုးလို့တန်းလန်း” ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ရေးလို့ ရမယ့် ပို့စ်ကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ – အခုလဟာ စက်တင်ဘာလဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် (9/11) Day ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရက်နဲ့လည်း နီးကပ်နေတာမို့ “ထူးတဲ့ (9)” အမည်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာတွေ ထူးသလဲ? ။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged9ဂဏန်း သင်္ချာ,9ဂဏန်းဖွားများ, burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ထူးတဲ့ ကိုး (9), ထူးတဲ့ ၉, ၉ ဂဏန်း ဆိုရင်, ၉ ဂဏန်း အကြောင်း	၉ ဂဏန်း နှင့် နာမည်ကျော်ကြားသူများPublished February 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	၉ ဂဏန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ အတော်များများမှာ အတော် ရေပန်းစားတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း” ဆိုတဲ့ စကားဟာ “မြန်မာ့ဂမ္ဘီရ လောက” မှာ အတော်ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ “၉ န၀င်း အဓိဌာန်” တို့၊ “၉ န၀င်း မိုးအလင်း” တို့၊ “၉ န၀င်းစီး ယတြာ“ တို့၊ “၉ န၀င်းသင်္ချိုင်း သံဒါး”တို့ “၉ န၀င်း ထွက်ရပ်လမ်း”၊ “၉ န၀င်း ဆေးတော်ကြီး” “၉ မြို့ရှင်၊ ရွာတော်ရှင်” . . “၉ တိုင်း ၉ ဌာန” “တြိစက္က ကိုးန၀င်းဇာတာ” တို့ဆိုတာ ပုတီးလိုင်း၊ ဗေဒင်လိုင်း၊ ဂမ္ဘီရလိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် နားမစိမ်းကြပါဘူး။
Posted in ဂမ္ဘီရ, နာမက္ခရဗေဒ, သင်္ချာဗေဒ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 18 Comments	# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished December 31, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, burmese zodiac, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, myanmar zodiac, myanmar zodiacal horoscope, myanmar zodiacal signs, zodiac astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ | 89 Comments	# စပ်မိ စပ်ရာ 2010Published December 28, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged ငလျှင်နှစ်, စပ်မိ စပ်ရာ 2010, ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု, နက္ခတ်ဗေဒင်, သပိတ်မှောက်မှုများ, သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ ငလျှင် | 14 Comments	# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂)Published November 22, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
(၁၂)ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ အပိုင်း (၁)(Click Here) ကို ရေးနေရင်း ပင်ပန်း နွမ်းနယ် မှုကြောင့် ခဏရပ်နားထားတဲ့ နေရာကနေ အခု အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြ သွားပါမယ်။ အခု ဟောကိန်းတွေကတော့ အကျဉ်းချုပ်ပါဘဲ။ နောက်ပိုင်း ဆောင်းပါးတွေမှာ အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင် အပိုင်း(၁)မှာ “ကရကဋ်ရာသီ” အထိ ပြီးသွားပြီမို့ အခု “သိဟ်ရာသီ” ကနေ ဆက်လက် ရေးသား သွားပါမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ယနေ့အတွက် ကိုသိန်းဖေ လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသော ကြောင့် အမေး/ အဖြေ ပုံစံမျိုး ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
သိဟ်ရာသီဖွား (သို့) မြင့်မြတ်သော နှလုံးသား ရှိကြသူများ
အင်္ဂလိပ်ရက် ဇူလိုင်လ (23)ရက်ကနေ သြဂုတ်လ (22)အတွင်း မွေးဖွားကြသူများဟာ သိဟ်ရာသီဖွားများဖြစ်ကြပါတယ်။ သိဟ်ရာသီ ဟာ (၁၂)ရာသီခွင်မှာ (၅)ခုမြောက် ရာသီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကသစ်ဂြိုဟ်ဟာ နေမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ “တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ “နိစ်ဂြိုဟ်” “ဥုစ်” ဂြိုဟ် မရှိပါဘူး။ ရာသီခွင်ရုပ်ပုံကတော့ “ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်း” ဖြစ်ပါတယ်။ “ထိရရာသီ” , “မီးရာသီ” , “ကျား” ရာသီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် – ဦးစီးဦးဆောင် ပြုလိုစိတ် များကြသူ များဖြစ်တယ်။ သူတပါးကို သြဇာပေးလိုသူများဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူ့ လွှမ်းမိုးမှုကိုမှ လက်မခံနိုင်ကြသူများ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သဘောထားကြီးတယ်။ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့နေရာမှာ လက်လွယ်တယ်။ အပေါင်းအသင်းများအပေါ်မှာ အလွန်ဖြောင့်မတ်စွာ ဆက်ဆံကူညီတတ် ကြသူများဖြစ်တယ်။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးကြသူများဖြစ်တယ်။ မိသားစုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် တတ်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့် သည်းခံတတ်ကြသူများဖြစ်ပေမယ့် အလွန်အကျွံ စော်ကားခံရရင် တော့ ခြင်္သေ့လို ရဲရင့်စွာ တုန့်ပြန်တတ်ကြတယ်။ (၁၂)ရာသီခွင် အားလုံးထဲမှာ ဒီရာသီခွင်ဖွားများဟာ စိတ်သဘောထားကြီး သူတွေ၊ ခွင့်လွှတ်တတ်သူတွေ၊ ပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုကို မမျှော်ကိုးဘဲ စိတ်ထားမှန်စွာ ကူညီတတ်ကြသူများအဖြစ် အတွေ့ရ များတာမို့ သူတို့ကို “မြင့်မြတ်သော နှလုံးသား ရှိကြသူများ” လို့ နာမည် ကင်ပွန်းတပ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Myanmar Astrology, သင်္ချာဗေဒ, ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ | 31 Comments	# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁)Published November 15, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ကျွန်ုပ် နှင့် ကိုသိန်းဖေ တို့ ၏ တနင်္ဂနွေ စကား ၀ိုင်း အစီအစဉ်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်ကွက်ခဲ့ရသည်မှာ အတော်ပင် ကြာခဲ့လေပြီ။ ယနေ့အတွက်မူ ထိုအစီအစဉ်ကို ပြန်လည် စတင်ရန်အတွက် မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ကိုသိန်းဖေ အား ပြန်လည်ခေါ်ယူ ဆက်သွယ်လိုက်ရ လေသည်။ ကျွန်ုပ် ဖုန်းဆက်လိုက်သည်နှင့် မကြာမှီအတွင်း ကိုသိန်းဖေလည်း ရောက်ရှိ လာလေသည်။
ကိုသိန်းဖေ။ ။ ကဲ ဆရာရေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားဝိုင်းလေး ပြန်စ, ကြမယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာ လိုက်တာဗျာ။
ကျွန်ုပ် ။ ။ အေးဗျာ- ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်လကျော်လာခဲ့ပြီ။ သင်္ချာဗေဒကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သူများအတွက် သင်္ချာဗေဒပညာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကျောရိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရာသီခွင်အဟောတွေကို တင်ဆက်ရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရော ကမ္ဘာမှာပါ (၁၂)ရာသီခွင် အဟောတွေဟာ ပလူပျံနေကြတာမို့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အပ်ကြောင်းတော့ ထပ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရာသီခွင်ဖွားတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေသာမက (ဗေဒင်ပညာကို လေ့လာ လိုက်စားနေသူတွေအတွက်) ဒီရာသီခွင်ဖွားတွေရဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေကို ဘယ်လိုဆွဲယူရတယ်ဆိုတာကိုပါ တင်ပြ ပေးသွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Myanmar Astrology, နက္ခတ်ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ | 26 Comments	# ကြယ်တွေစုံတဲ့ ညPublished November 1, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အညာကို ကထိန်သွားခင်းရာက အပြန်မှာ ခရီးပန်း လာတာကြောင့်လား ? ခရီးသွားနေစဉ်မှာ တင်နေတဲ့ အလုပ်အကြွေး ဒဏ်တွေ ပိ,တာကြောင့်လား တော့ မသိဘူး- နှာစေး ချောင်းဆိုးရာ ကနေ “အဖျား” ပါ ၀င်လာပါတယ်။ အခု ဒီစာကို ရေးနေချိန်မှာ ဖျားနေပြီး ချောင်းတစ်ဟွတ်ဟွတ် ဆိုးနေရင်းနဲ့ ရေးနေတာပါ။
တီဗွီရှေ့မှာ ခဏ ထိုင်ရင်းနဲ့ “ထူးအိမ်သင် အမှတ်တရ” အစီအစဉ်လေးကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကွယ်လွန်သူ “ကိုငှက်” ခေါ် “ထူးအိမ်သင်” ရဲ့ “ကြယ်တွေ စုံတဲ့ည” သီချင်းလေးကို နားထောင် လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ အနှစ်သက်ဆုံး သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါဘဲ။ “ကြယ်တွေစုံတဲ့ ည” တဲ့ ။
သြော် – ဟုတ်ပါရဲ့။ ဒီနေ့ဟာ “တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်” နေ့ပါလား? ။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ဟာ “နက္ခတ်၊ ကြယ်တာရာ” တွေ အစုံ ထွန်းလင်းတဲ့ ညတစ်ည ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ “ကြယ်တွေစုံတဲ့ ည” လေး တစ်ညပါလား။ တနှစ်တာလုံး ဒီနေ့တစ်ရက်သာ အာကာသ ကောင်းကင်ပြင်မှာ နက္ခတ်တာရာ အားလုံး စုံစုံ ညီညီ ထွန်းလင်းတဲ့ ညလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော် ကတည်းက တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ညဟာ ကြယ်တာရာ အစုံအညီ ထွန်းလင်း တောက်ပကြတာ ကြောင့် “နက္ခတ်ပွဲသဘင်” များ ကျင်းပလေ့ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ “နက္ခတ်ပွဲသဘင်နေ့” မှာဘဲ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ လက်ယာတော်ရံ နဲ့ လက်ဝဲတော်ရံ ဖြစ်လာကြမယ့် “ရှင်သာရိပုတ္တရာ” နဲ့ “ရှင်မောဂ္ဂလန်” အလောင်းအလျာ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးတို့ဟာ “နက္ခတ်ပွဲ” သဘင်ကို ကြည့်ရှု နေကြရင်း အခု နက္ခတ်ပွဲသဘင်မှာ ပျော်ပါးနေကြတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ နောင် နှစ် (၁၀၀)ဆိုရင် တစ်ယောက်မှ မရှိကြတော့ပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးကို တွေးမိပြီး သေခြင်းတရားကို ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မိရာကနေ “သံဝေဂဉာဏ်” ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။ ဒီသံဝေဂဉာဏ်ကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးဟာ “မအိုရာ၊ မနာရာ၊ မသေရာ” ကို ရှာကြရင်း နဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပြီး ကျွတ်တမ်းဝင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged Myanmar Astrology, ကြယ်တွေစုံတဲ့ ည | 13 Comments	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,711)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,389)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,201)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,033)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,060)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,369)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,193)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,704)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,744)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,401)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,354)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,207)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,158)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,407)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,065)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,907)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,752)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,750)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,290)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,895)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,776)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,610)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,559)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,352)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,156)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,144)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,052)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
38 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.